अमेरिकी सुरक्षा संवेदनशील संस्थामा विज्ञ बनिन् नेपाली महिला - Pardeshi Khabar
Post by: आकाश शेर्पा प्रकाशीत मिति: July 9, 2019
काठमाडौं, २४ असार । महिलालाई अशक्त र अवला देख्ने पितृप्रधान समाजले प्राविधिक क्षेत्रमा महिलाको कुन स्तरसम्मको सफलता अपेक्ष गर्ला ? यस प्रकारको सफलतामा एक नेपाली महिलाले विकसित मुलुकका पुरुषहरुलाई समेत पछाडि पारेकी छन् भन्दा कतिलाई पत्यार लाग्ला ? नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
उहाँ व्यवसायी श्रीमान् र १२ वर्षीय छोरासहितको सुखी परिवारकी सदस्य हुनुहुन्छ ।
« चालीस अर्ब ठेक्का सेटिङ गर्दै मन्त्री र डीजी, एउटै प्याकेजबाट दुई अर्ब हात पार्ने दाउ (Previous News)
(Next News) त्रिविमा गोल्ड मेडल बेचुवाहरूलाई कारबाही गर्न मुद्दा दर्ता »